PRADEEP BASHYAL: खेल्दै सिक्दै
घडिमा साझको ४ बज्नै लाग्दा पालेदाईले स्कुलको घण्टी बजाउछन् । तर पनि कक्षा एकमा पढ्ने रुपा नेपालीलाई घर जान हतार भने छैन । उनी अझै साथीहरुसग मिलेर कक्षामा पढ्दै छिन् । उनको हातमा न त किताब छ न त कपी नै । मकैको घोगाहरु आपसमा साटासाट गरेर उनीहरु गणितको जोड–घटाउ सिक्दैछन् । ‘पढ्नु र खेल्नु यहा उस्तै उस्तैझैं हुन्छ’, शिक्षिका मीना डुम्रेले बताइन्, ‘त्यसैले यिनीहरु घरमा भन्दा स्कुलमै बढ्ता रमाउछन् ।’
नवलपरासी जिल्लाको पहाडि भेगमा पर्ने श्री जनकल्याण राष्ट्रिय प्रावि, धौवादीमा बाल मैत्री कक्षा शुरु भएपछि आजकल विद्यालयको माहोल नै फेरिएको छ । विद्यालय हाताभित्र छिर्ने बित्तिकै त्यसको अनुभव जो कोहिले सजिलै गर्न सक्छन् । आजकल स्कुलको चौरमा कहिँकतै प्लास्टिक र फोहरका टुक्राहरु भेटिदैनन् । कक्षाकोठा भित्रको वातावरण त झन् रमाइलो छ । तर त्यहा“ डेक्स–बेञ्चहरु भने हु“दैनन् । कार्पेट बिछ्याइएको भुइमा चकटीमा बस्छन् ।
साना बालबालिकाले सजिलै लेख्न सकुन् भनेर कम उचाईमै कक्षा कोठाको चारैतिर लहरै ब्याकबोर्ड बनाइएको छ जसमा सबै विद्यार्थीहरुले एकैपटक लेख्न सक्छन् । सन्ध्या यादवले माछाको चित्र बनाउदै छिन् त नारायण डुम्रेले पहाडको । उता अनुष्का डुम्रे भने कक्षामा भएका कागजका टुक्राहरु टिप्दै डस्टबिनमा हालिरहेकी छन् । उनीहरु प्रत्येक दिन आज के गर्ने भनेर विहान आफै योजना बनाउ“छन् । अनुष्काको भागमा त्यस दिन सरसफाई गर्ने जिम्मा परेको रहेछ । ‘प्रकाशले आज खेल खेलाउने’, अनुष्काले भनिन् । बाल मैत्री कक्षाको विशेषता भनेकै कक्षामा सबै काम मिलेर गर्ने हो । ‘यसरी पढ्दा बालबालिकाहरु सानैदेखि कामप्रति जिम्मेवार हुन सिक्छन्’, ग्रेड शिक्षक प्रेम मश्राङ्गिले बताउनु भयो, ‘पहिले पहिले पढाउने तरिकाले भन्दा अहिलेकोले उनीहरु निकै बढि सिर्जनशील र आत्मविश्वासी भएका छन् ।’ उनीहरुको विद्यालय हेर्न भनेर हालसालै पुग्नुभएका महिला बालबालिका तथा शिक्षा राज्यमन्त्री रामवचन यादव साना बालबालिकाहरु पनि यती धेरै आत्मविश्वासी भइसकेछन् भनेर दंग पर्नुभयो । उनीहरु अरुजस्तो किताबका भारी बोकेर पनि आउनु पर्दैन । ग्रेड कक्षा शिशु, एक र दुईसम्म पढाइन्छ । न त घोक्नु पर्ने गरी नै पढाइन्छ । कक्षाको भित्तामा ‘क..ख..ग..’, ‘अ..आ..’, ‘ए..बि..सि’ र अंकहरु समेत चित्रसहित लेखिएका छन् । स्वच्छ रहन के गर्नुपर्छ भन्ने पनि कक्षाको भित्तामा चित्र गराएरै देखाइएको छ ।
सर मेडमले पढाउन जादा कहिल्यै लठ्ठी बोकेर जानुहुन्न । न त गाली नै गर्नुहुन्छ । मेडम पनि विद्यार्थीहरुसग नाच–गान गर्नुहुन्छ । त्यसैले पनि उस्तै अप्ठ्यारो नपरिकन विद्यार्थीहरु अनुपस्थित पनि हुदैनन् । यस्तो शिक्षालाई ‘ग्रेड टिचिङ्ग’ भनिन्छ जहा विहानदेखि साझ छुट्टि नहुदासम्म एउटै शिक्षकले पढाउनु हुन्छ । ग्रेड टिचिङ्ग पढाउन भनेर यहाका सरमेडमले विशेष तालिम लिएका हुन् । उहाहरुले निकै मिहिनेत गरेर एक्लैले कक्षाकोठालाई त्यतीधेरै चिटिक्क पार्नुभएको हो । तर सरकारले भने त्यती राम्रो काम गर्दा पनि उहाहरुलाई थोरैमात्रै पैसा (मासिक अठार सय) दिएको छ । तर वहाहरुको योगदान भने कमको छैन । थौरै पैसा नै पाए पनि विद्यार्थीहरुलाई वहाहरु निकै माया मानेर पढाउनु हुन्छ । कुनै दिन कोही स्कुल आएन भने कारण बुझ्न उसकै घर समेत पुग्नुहुन्छ । स्कुल नआइकन घर बसेकालाई खोजेरै भए पनि स्कुल ल्याउनु हुन्छ ।
जनकल्याण प्राविको जस्तो बाल मैत्री कक्षाहरु अहिले देशका सयौं ठाउमा शुरु भएका छन् । विद्यालयमा बालबालिकाको भर्ना दर बढाउन यस्ता कक्षाले निकै महत्वपूर्ण काम गरेको छ । नेपाल सरकारको ‘विद्यालयमा स्वागत’ कार्यक्रम अन्तरगत धेरै सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरु मिलेर यसरी पढाउने शैलीको विकास गरेको हो । जसले विद्यालयमा भर्ना हुने दर ह्वात्तै बढायो । फेरी बाल मैत्री कक्षा पढ्नलाई धेरै पैसा लाग्ला कि भनेर आत्तिनु पनि पर्दैन । सरकारले कक्षा पा“चसम्म सम्पूर्ण शिक्षा निःशुल्क गराएको छ । कहिकतै त खाजा पनि निःशुल्क ख्वाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
पहिले भन्दा अहिले कक्षा एकमा एक्काइस प्रतिसतले भर्ना हुने क्रम बढेको छ भने कुल भर्नादर पनि सत्तरी प्रतिसतबाट चौरानब्बेमा पुगेको छ । तर पनि अझै विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाहरु मध्ये बीस प्रतिसत कक्षा पाचमा नपुग्दै छाड्छन् । कतै त्यो बाल मैत्री कक्षा पो नभएर हो कि ?
तस्विरः विद्रोही गिरी
A small part of this feature appeared in print in KOPILA,achild supplement in KANTIPUR daily.
written by Admin at 7:36 AM